Safarada Somaliyeed ee Wadanka Malaysia oo Deeq Raashin Ah ugu deeqday Qoysas Qaxooti ku ah Wadanka Malaysia “SAWIRRO” | Farfiiq
Safiirka Safaaradda Soomaaliya ee Wadanka Malaysia Danjire Abuukar Cabdi Cismaan “Mardaadi” oo u wehliyo Xoghayaha saddexaad Mudane Aweys Abshir Diiriye iyo qaar ka mid ah howlwadeenada safaaradda ayaa maanta deeq raashin ah soo gaarsiyay in ka badan 700 Qoys oo ka mid qoysaska Soomaaliyeed ee Qaxootinimada ugu nool Wadanka Malaysia.
Deeqdaan ayaa noqonayso deeqdii ugu horeysay oo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Malaysia soo gaarta, iyadoo ugu timid safaaradda Soomaaliyeed ee wadanka Malaysia. waxayna ku soo aadaysaa iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan oo ah bil ay bulshada Soomaaliyeed ay garab istaag u muujiyaan kuwooda jilicsan.
Safiirka Soomaaliya ee wadanka Malaysia Danjire Abuukar Cabdi Cisman ayaa mar uu ka hadlayay munasabada deeqda lagu gudoonsiinayay todobada boqol ee qoys, wuxuu balan qaaday in aysan noqon doonin deeqdii ugu danbaysay, balse ay noqon doonto mid bilaw u ah oo inta lagu jiro bisha barakaysan iyo wixii ka danbeeyaba ahaan doonto mid joogta ah, waxay ku qaatataba. Wuxuuna sidoo kale balan qaaday in uu si dhaw ugu war hayn doona baahiyaha gaarka ah ee muwadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Malaysia.
Mid ka mid ah hooyooyinka nasiibka u yeeshay in ay deeqda guddooman maanta oo ka hadashay munasabadda ayaa amaan iyo ducaba iskugu darday howlwadeenada safaaradda oo uu ugu horeeyo Safiirka Safaradda Danjire Abuukar Cabdi Cisman iyo dowladooda.
“Wadankaan waxaa ku noolahay sagaal sano, Safaradda Soomaaliyeed ee wadanka waxay shaqaynaysaa lix sanadood, weligeen maan arag safiir ka socda safaradda marka laga reebo Ambassador Abuukar “Mardaadi”, oo intuu kursigii uu ku shaqeenayay ka soo kacay, nala dareemay culeesyada na heesta guryaheena nagu soo booqday, weliba gacmihiisa nagu guddoonsiinayay deeqda uu inoo soo gartay in uu na soo gaarsiiyo, weliba anagoo filanaynin taasi oo farxad nagu abuurtay” ayay tiri Hooyo Soomaaliyeed.
Waa markii ugu horeysay oo ay Safaaradda Soomaaliyeed Deeq raashin ah soo gaarsiiso qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan Wadanka Malaysia bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo hore deeqo iyo agab waxbarasho soo gaarsiin jirtay carruurta qaxootiga ah si ay waxbarasho u helaan.
Wadanka Malaysia ayaa marti galinaya qaxooti aad u fara badan oo wadamo kala duwan ka yimid, haba ugu badnaadan Wadamada ay colaadaha ka jiraan, waxayna qaxootiga Soomaaliyeed ee ka mid ah qaxootiyadaas ay ugu duwan yihiin kuwa kale in ay garab istaag buuxa ka helaan safaradooda, halka kuwa kale ay wax ka sugaan hay’adaha Qaramada Midoobay.